ရထားအားဖြင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား > ရထားအားဖြင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်
စာဖတ်ချိန်: 11 မိနစ်များ
ပြင်သစ်ရှည်လျားလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားတစ်အကြိုက်ဆုံးနှင့်တဦးတည်းခဲ့ ဥရောပ၌နေရာများ. ဒါကြောင့်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကြောင်းပေးထား, ဒါကြောင့်ရထားခရီးသွားမှသဘာဝကျပါတယ်. ပြင်သစ်အစိုးရမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပါတယ် (အကြီးစားရွှေအလိုင်းအမြန်နှုန်းကို TGV) နှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (ဂရိတ်ရထား TGV ကိုရွှေမြန်နှုန်းရထား). ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 1056 မိုင် (1700 ကီလိုမီတာ) ဆက်ကပ်အပ်နှံမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းအဖြစ်အဓိကနှင့်သေးငယ်လိုင်းများမိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏၏. နီးပါးတစ်နိုင်ငံလုံးပြင်သစ်ရထားလမ်းမှတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ပါသည်. ပြင်သစ်ရဲ့ရထားအကျိုးရှိစွာများမှာ, လျင်မြန်စွာ, သငျသညျအဖြစ်မည်သည့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကမှသို့မဟုတ်လည်းတိုင်းပြည်အတွင်းသွားချင်ဘယ်မှာနှင့်သင်ရလိမ့်မယ်. သငျသညျပြင်သစ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအချိန်ခရီးသွားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, မီးရထားခရီးသွားလာသုံးပြီးန်းကျင်ရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသတိထားခရီးစဉ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ. သို့သျောလညျး, အဆိုပါရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုရှုတ်ထွေးအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါသည်, အထူးသဖြင့်သင်ကပြင်သစ်စကားမပြောတတ်သို့မဟုတ်စာမဖတ်ကြဘူးသည့်အခါ. အကူအညီနဲ့ရန်သင့်အားပြင်သစ်တွင်ရထားစနစ်ကနားလည်, ကျနော်တို့ရထားပြင်သစ်တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားတစ်ဦးပြည့်စုံလမ်းညွှန်ဖန်တီး.
ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာ, သင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်ကိုသိရန်လိုအပ်သမျှအထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်. ငါတို့သည်လည်းကွဲပြားခြားနားသောရထားပြင်သစ်တွင်လုပ်ကိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီများနှင့်ရထားအမျိုးအစားများအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးသွားမှာပါ. အကြှနျုပျတို့သညျနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းလက်မှတ်များဝယ်ယူအပေါ်တန်ဖိုးရှိသောအကြံပေးချက်များကိုပေးမည်, ရထားလမ်းစနစ်ကသွားလာ, ရထားလမ်း 'passes ၏အကျိုးကျေးဇူးများ, နှင့်ပဲရစ်ကနေပြင်သစ်န်းကျင်လာပြီ. ရထားပြင်သစ်မှသွားလာရန်မည်သို့မည်ပုံရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဆိုပါအပြီးအစီးလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ဖြင့်ရထားဖတ်နေသိမ်းဆည်းထားပါ.
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco-Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. thဆောင်းပါး Save ကိုတစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
ပြင်သစ်ရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်သည်အများအပြားလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ဝဘ်ဆိုဒ်များရှိပါတယ်. သူတို့ကသုံးမျှမျှတတလွယ်ကူပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအတော်များများကျွန်တော်ထောက်ပြဖို့လိုအပ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် quirks နှင့် oddities အတူပါလာ.
တစ်ဦးရထားကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ် digitized ကြောင်းကုမ္ပဏီနှင့် revolutionized ရထားလမ်းလက်မှတ်ဝယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်. သူတို့ရဲ့ website သို့သွားရောက်ကြည့်ရှု, နှိုင်းယှဉ်ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်း, ရထားလိုင်းကိုရှေးခယျြ, နှင့်ထိုင်ခုံအမျိုးအစားငျလိုခငျြ. သင်သည်သင်၏ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ပင် Bitcoin နှင့်အတူပေးဆပ်နိုင်ပါတယ်. အမှု၌သင်၏အမီးရထားလက်မှတ်ရဲ့စျေးနှုန်းကျဆင်းမှု, ပလက်ဖောင်းသင်သိပါစေမည်ဖြစ်ပြီးအကူအညီနဲ့သင်တစ်ဦးအနိမ့်သောစျေးနှုန်းထိုသို့ဖလှယ်.
W ကကြက်၏တရားဝင် website ကိုဝင်ရောက် ပြင်သစ်မီးရထား, သငျသညျအမြားဆုံးဖြစ်ကောင်း RailEurope.com မှ redirected ရလိမ့်မယ်, ပြင်သစ်မီးရထား၏တရားဝင်မြောက်အမေရိကဖက်ထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သင်အမြဲရထားဥရောပအပေါ်ဈေးအပေါဆုံးကိုပုံမှန်အတိုင်းကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်. ထိုကွောငျ့, သင်တစ် ဦး Save A ရထားပေါ်တွင်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလမ်းကြောင်းနှုန်းထားများဖြစ်ကြောင်းအမြဲသတိထားသင့်ပါတယ်.
တစ်ဦးလက်မှတ်ပြတင်းပေါက်ထဲကနေနှင့်တော့အရောင်းစက်မှာ - ဘူတာရုံမှာပြင်သစ်ရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ခြင်းငှါနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်. အင်္ဂလိပ်စပီကာကသူတို့ကိုဖြစ်စေလမ်းယ်ယူနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်မလျောက်ပတ်သည်နှင့်ကောင်းစွာလက်မှတ်ပြတင်းပေါက်မှာလူတစ်ဦးနှင့်အတူမဆက်သွယ်နိုင်လျှင်, အဆိုပါတော့အရောင်းစက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာလမ်းကြောင်းရှာရန်ရန်လွယ်ကူသည်, သငျတို့သပင်၎င်း၏ဘာသာစကား setting များကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်. အဆိုပါတော့အရောင်းစက်ကနေလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ယူတဲ့ Chip လိုအပ်ပါတယ် & PIN ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်.
ဘူတာရုံမှာတက် Pick. ဘူတာရုံမှာသင့်ရဲ့လက်မှတ်စုဆောင်းရန်, သင်တစ်ဦးဘွတ်ကင်သတင်းအချက်အလက်နံပါတ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည် (သင်လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ဖို့အသုံးပြုအတူတူပင်တဦးတည်း).
ပုံနှိပ်ပါ-မှာ-အိမ်မှာလက်မှတ်တွေ. သင်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, သူတို့ကိုသင် print ထုတ်ခြင်းနှင့်လက်မှတ်တွေ check လုပ်ပေးပါတယ်သူရထားစပယ်ယာကသူတို့ကိုဖျောပွနိုငျ.
အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်တွေ. သင်သည်သင်၏လက်မှတ်များ print ထုတ်ချင်ကြပါဘူး အကယ်., သင်သည်သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုမှသူတို့ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. သင်ရုံသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုမျက်နှာပြင်မှတဆင့်စပယ်ယာသင့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်.
ပို့လက်မှတ်တွေ. တချို့ကန်ဆောင်မှုကိုပုံမှန်မေးလ်ကနေတဆင့်သင်လက်မှတ်တွေပို့ခြင်း၏ထို option ကိုကမ်းလှမ်း. သို့သျောလညျး, တစ်ဦးကအလွန်နှေးကွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်, ထို့ကြောင့်, မထောက်ခံအုကူံပ option ကို.
ဒေသဆိုင်ရာ / ဒေသခံရထား. ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသခံရထားဆင်ခြေဖုံးနှင့်ဒေသတွင်းဒေသများ connect. RER နှင့် Transilien Connect ဆင်ခြေဖုံးပဲရစ်, စဉ်တွင် Ter ရထား (ရထားဒေသဆိုင်ရာ Expres) ဒေသဆိုင်ရာရထားသေးငယ်မြို့များနှင့်အတူ Connect ဒေသဆိုင်ရာအချက်အချာကြောင်းများမှာ. သငျသညျကိုကြိုတင်ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသခံရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ရန်မလိုပါ, ရုံပိုင်ခွင့်ထွက်ခွာရှေ့တော်၌မဝယ်.
Intercite ရထား (အိုင်စီ). တစ်ဦး Intercites ရထားမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မြို့ကြီးများပေါ်တွင်ခရီးသွားအဖြစ်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကွာအဝေးမထားတဲ့အမြန်ရထားဖြစ်ပါသည်. လျှော့စျေးရရန်အတွက် IC လက်မှတ်များကိုကြိုတင် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်.
high-speed ရထား (TGV). TGV ရထားပြင်သစ်တွင်အမြန်ဆုံးရထားများမှာ, နှင့်ထိုသူတို့အဘို့လက်မှတ်များဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြသည် 90 ကြိုတင်မဲအတွက်ရက်ပေါင်း. သူတို့အဘို့စျေးနှုန်းများထွက်ခွာသွားနေ့စွဲချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်မြင့်တက်ဆက်လက်, ဒါကြောင့်နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းအစောပိုင်းသူတို့ကိုစာအုပ်ဆိုင်. ဝယ်ယူတစ်ဦးကလက်မှတ် 90 ကြိုတင်မဲအတွက်ရက်ပေါင်း€အသက် 30 ကုန်ကျနိုင်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ထွက်ခွာသွားရှေ့တော်၌မဝယ်ကြပါလျှင်, လက်မှတ်စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၀၀ အထိမြင့်နိုင်သည်.
သငျသညျရထားပြင်သစ်တစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားမှသုံးနိုငျရထားလမ်းဖြတ်သန်းလက်မှတ်တွေ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်. သူတို့ထဲကတချို့ကသင်ပြင်သစ်နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများအတွင်းခရီးသွားလာခွင့်ပြု, ပြီးတော့ပြင်သစ်အတွင်းခရီးသွားဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာဖြစ်ကြောင်းရထားလမ်း 'passes ရှိပါတယ်. ပုံမှန်ရထားလက်မှတ်တွေမတူဘဲ, ရထားလမ်းဖြတ်သန်းလက်မှတ်တွေအချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတူပါလာ:
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်. တစ်ရထားလမ်းဖြတ်သန်းလက်မှတ်နှင့်အတူ, သငျသညျန့်အသတ်မီးရထားခရီးသွားလာရ. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်းရုံဘူတာရုံကိုသွား, ရထားဘူတာရုံရုံးအတွင်းရထားလမ်း pass ကိုချေမှုန်းပစ်ဖို့နဲ့နောကျရရှိနိုင်မီးရထားပေါ်ရ.
လျှော့စျေး. ရထားလမ်းဆွဲဆောင်မှုများအတွက်အထူးလျှော့စျေး၏ပါဝင်နိုင်အတူပါလာပုံမှန်အားဖြတ်သန်း, ထိုသူတို့အဘို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option ကိုအောင် ဘတ်ဂျက်ခရီးသွားများအတွက်. သူတို့ဟာကြီးမားတဲ့ပိုက်ဆံ-ချွေတာနိုင်ပါတယ်, ကလူရထားလမ်း 'passes ဝယ်ယူရန်အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်. သငျသညျကိုကြိုတင်မှာသူတို့ကိုစာအုပ်ဆိုင်ဘူးလျှင်နောက်ဆုံးမိနစ်ရထားလက်မှတ်တွေအကုန်အကျနိုင်ပါတယ်.
အဆင်သင့်ခြင်း. သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ဝယ်ယူအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်သင့်အားရထားယူချင်တိုင်းအချိန်မလိုအပ်ပါဘူး, သင်ဆန္ဒရှိသည့်ရထားတိုင်းတွင်နေရာမရှိတော့သောကြောင့်သင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရမည်.
တစ်ရထားလမ်းဖြတ်သန်းလက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်အခါ, သင်တို့အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ Pass ကို နှင့် multi-နိုင်ငံ Pass ကို (Eurail ကို Global Pass ကို).
အဆိုပါ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Pass ကို ကအမျိုးသားရေးရထားလမ်းကွန်ယက်ပေါ်တွင်န့်အသတ်ခရီးသွားထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်သင်ရုံပြင်သစ်တွင်ခရီးသွားလာလျှင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်ပါသည် (အချင်းချင်းအပါအဝင်, Ter, TGC, စသည်တို့ကို). သငျသညျဖြစ်စေရှေးခယျြနိုငျ 1 သို့ 8 တစ်လအတွင်းခရီးသွားကာလအဖြစ်ပထမနှင့်ဒုတိယလူတန်းစားများအကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ. တစ်ဦးက ထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထား မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားများအတွက်ရထားလမ်းဖြတ်သန်းအပြင်လိုအပ်ပါသည်. ဒီ pass နှင့်အတူ, သင်သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်အထူးလျှော့စျေးကိုလက်ခံရရှိ, ကူးတို့, cruises, ဟိုတယ်များ, ပြတိုက်, နှင့်အခြားဆွဲဆောင်မှု.
အဆိုပါ Eurail ကို Global Pass ကို သင်သည်လည်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ခရီးသွားလာရန်စီစဉ်လျှင်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်. ဤသည် Multi-တိုင်းပြည်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့န့်အသတ်ခရီးသွားထောက်ပံ့ 31 ဥရောပတိုက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ (ပြင်သစ်အပါအဝင်). Eurail 'passes နှင့်အတူ, သင်တစ်ဦးရထားဖမ်းနိုင်ပါတယ်အကြိမ်အရေအတွက်မျှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်. တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ 3, 5, သို့မဟုတ်7တစ်လအတွင်းခရီးသွားကာလသို့မဟုတ် 10-15 နှစ်လအတွင်းခရီးသွား၏ရက်ပေါင်း. ထွက်ခွာမတိုင်မီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ကိုသတိရပါ.
အများစုမှာရထားလမ်း 'passes စက္ကူ-based များမှာ, သငျတို့သနေ့ရက်တိုင်း၏ပထမဦးဆုံးခရီးစဉ်ရှေ့၌သင်တို့ထွက်ခွာ၏နေ့စွဲရေးသားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများအတွက်ထိုင်ခုံသံသယထိုင်ခုံနှုန်း€ 10 နှင့်€ 20 အကြားသင်ကုန်ကျမည်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားကြိုတင်€ 35 ကနေထိုင်ခုံနှုန်း 89 €အထိစဉ် (destination သည်ပေါ် မူတည်.).
အရေးပါတဲ့မှတ်ချက်: သငျသညျထက်ပိုမှခရီးသွားလေ့ကျင့်လျှင်ရထားလမ်း Pass ကိုပိုက်ဆံအဘို့ကိုသာအကောင်းတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည် 14 Save A Train ကဲ့သို့သောရထားလက်မှတ်များထက်နိမ့်သည်ထက်နည်းသွားလျှင်သင်၏ငွေအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတန်ဖိုးကိုပေးသည်.
ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသခံရထားတွင်, သင်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မှတ်နှင့်အတူခရီးသွားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်. တရားဝင်အောင်ပြုလုပ်ပါသို့မဟုတ် "တံဆိပ်ခေါင်း" သင်၏လက်မှတ်ရန်သင့်ထွက်ခွာရှေ့တော်၌ validation ကိုသေတ္တာကိုသွားပါ. သငျသညျထွက်ခွာရှေ့မှာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့ပါဘူး အကယ်., ရထားပေါ်ရှိစဉ်ကချေမှုန်းပစ်ဖို့ရန်အစပယ်ယာဘို့စောင့်ဆိုင်း. ဒေသတွင်းနှင့်ဒေသခံရထားမထိုင်ခုံသံသယရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပဲဘယ်နေရာမှာမဆိုထိုင်.
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတွင်, သင့်ရဲ့လက်မှတ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်တိကျတဲ့အချိန်လည်းရှိ၏, နှင့်လက်မှတ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်များအတွက်သာတရားဝင်သည်. သင်တစ်ဦးထိုင်ခုံကြိုတင်မှာကြားထားရှိသည်ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်မှတ်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်မလိုအပ်ရှိပါတယ်. သင်သည်လက်ျာကားတစ်စီးနှင့်ထိုင်ခုံကိုရှာဖွေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ (နံပါတ်များသင့်ရဲ့လက်မှတ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်နေကြတယ်).
ခရီးသွားဧည့်ပြင်သစ်ငှါလာကြသောအခါ, သူတို့ထဲကအများစုဟာပဲရစ်ကိုတိုင်းပြည်အတွင်းရထားခရီးစဉ်တွေအတွက်အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်. ပဲရစ်မှာစတင်လာတဲ့အခါ, သငျသညျတိုင်းပြည်အတွင်းနီးပါးမည်သည့်ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကား Parisian ရထားဘူတာကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်အဓိကနေရာများတချို့ရှိနေပါတယ်.
Gare d'Austerlitz သို့မဟုတ် Austerlitz ရထားဘူတာ – ဘော်ဒိုး, Limoges, Poitiers, Toulouse, Biarritz, Tours မှ, နှင့်အနောက်ပိုင်းစပိန်.
Montparnase ရထားဘူတာ သို့မဟုတ် Gare Montparnasse – အနောက်ပိုင်းပြင်သစ်မှအားလုံး TGVs (Rennes, Nantes, Brest, Brittany)
Gare du Nord – အရှေ့မြောက်ပြင်သစ်, Valenciennes, သေးငယ်သော, Calais; ဘရပ်ဆဲလ်, Cologne, နှင့်အမ်စတာဒမ် (Thalys); လန်ဒန် (Eurostar).
Gare de Lyon – ပြင်သစ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း. Montpellier, Dijon, လိုင်ယွန်, Clermont-Ferrand, Besançon, Marseille, nice. ပြင်သစ်၏အရှေ့ Mulhouse. Catalonia (Girona, ဘာစီလိုနာ), အီတလီ, နှင့်ဆွစ်ဇာလန် (ဂျီနီဗာ, ဇူးရစ်).
စိန့် Lazare မီးရထားဘူတာ သို့မဟုတ် Gare စိန့်. Lazare – သည် Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg.
အရှေ့ဘူတာ – နန်စီ. Reims, Metz, Strasbourg, လူဇင်ဘတ်, နှင့်ဂျာမနီ.
ရထားဘူတာရုံမှာအစောပိုင်းရောက်ရှိ. အနည်းဆုံးရထားဘူတာရုံမှာဖြစ်ရန်သေချာစေပါ 20 မထွက်ခွာမှီမိနစ်, သို့မဟုတ်သင်ကြီးမားရထားဘူတာကနေခရီးသွားလာနေသောတောင်မှအစောပိုင်းလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်အတွက် Gare du Nord အဖြစ်. ပြင်သစ်စကားမပြောတတ်ပါဘူးသူတစ်ဦးခရီးသွားဧည့်များအတွက်, သွားကြဖို့ဘယ်မှာ၏နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးမလိုဘဲထွက်ခွာမတိုင်မီသာမိနစ်အနည်းငယ်ရောက်ရှိလာထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူး. အစောပိုင်းအလုံအလောက်ရောက်ရှိလာသငျသညျဘူတာရုံသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ထွက်ခွာဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေးဖို့အချိန်ကိုငါပေးမည်, သင့်ရဲ့ရထားထွက်ခွာသောပလက်ဖောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်, နှင့်မှန်ကန်သောပလက်ဖောင်းကိုရှာပါ.
သင့်ရဲ့အိတ်စွန့်ခွာဘယ်တော့မှမပိုင်ရှင်မဲ့. သငျသညျအခြို့သောမုန်သို့မဟုတ်ရေတစ်အနီးအနားဆိုင်ဖို့လမ်းလျှောက်ဖို့လိုလိမ့်မည်. သင်တို့ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, ပင်တစ်စက္ကန့်ဘို့အပိုင်ရှင်မဲ့သင့်ရဲ့အိတ်ကိုချန်မထားဘူး. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သင်သည်သင်၏အိတ်အတွေ့အကြုံရှိသူခိုးများကခိုးယူရှိခြင်းအန္တာရာယ်. ပြင်သစ်တွင်ဗိုလ်မှူးရထားဘူတာ (ပဲရစ် Gare du Nord အပါအဝင်, ပဲရစ် Gare de Lyon, နှင့်သည်ပဲရစ် Austerlitz ဘူတာရုံ) အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအတွက်ဘယ်ဘက်အိတ် Locker တွေရှိတယ်. မဝင်ခင် သော့ခတ်areaရိယာ, X-rayed သင့်ရဲ့အိတ်ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထား. onboard ပြီးတာနဲ့, သင့်ရဲ့အိတ်နေရာ သင့်ရဲ့မျက်စိအတွင်းအစားပူဇော်သောအိတ်နေရာများပေါ်တွင်.
တချို့အစားအသောက်ထုပ်ပိုး. ခရီးသည်ရထားပေါ်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာကိုရောက်စေဖို့ခွင့်ပြုနေကြတယ်, ခရီးဝေးရထားစီးဘို့သည်ကြီးမြတ်တော်မူသော. တချို့ကရထားဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးကဖီးများ, နှင့်သူတို့ထဲကအများစုဟာပတ်ပတ်လည်လာမယ့်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလှည်းများ. ကံမကောင်းသဖြင့်, အဆိုပါပုံဖမ်းတွန်းလှည်းအမြဲမလာပါဘူး, နှင့်ဖီးပိတ်ပစ်စေခြင်းငှါ. ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်အစားအသောက်နှင့်အချိုရည်လည်းပိုပြီးစျေးကြီးတယ်. သို့ ပိုက်ဆံကယ်တင်, တိုင်းခရီးစဉ်မတိုင်မီကိုယ့်ကိုယ်သင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာအတူပျော်ပွဲစားထုပ်ပိုး. အမျိုးမျိုးသောအဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များသင်သည်အစားအစာနှင့်အချိုရည်ဝယ်နိုင်ဘယ်မှာအများဆုံးရထားဘူတာများတွင်ရှိပါတယ်.
ဒေါင်းလုပ်တစ်ဦး ရထားလမ်းစီမံ သင့်ဖုန်း app ကို. သင့်ရဲ့ရထားကပိုအဆင်ပြေသွားရောက်ကာအောင်ရထားလမ်းစီမံသင်သည်တပ်ဆင်နိုင်သည် apps များနှင့်အသုံးပြုမှုများ၏အကွာအဝေးရှိပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးအားလုံးပါဝင်ပါသည် ဥရောပရထားများအတွက်အချက်အလက်နှင့်ရထားအချိန်ဇယား, တချို့ apps များအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မလိုအပ်ပါဘူး. တစ်ရထားလမ်းစီမံ app ကိုနှင့်အတူ, သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့ရထားနှောင်းပိုင်းကဖြစ်သွားရှိမရှိသိရကြလိမ့်မည် (နှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေဖြင့်) သို့မဟုတ်အချိန်ပေါ်, အဖြစ်ကရောက်လာပါလိမ့်မယ်ထားတဲ့ပလက်ဖောင်း / မသှား. တွင် အဓိကမြို့ကြီးများ ပဲရစ်နဲ့တူ, တဦးတည်းမရှိ “အဓိက” ဘူတာရုံ, နှင့်အခြားဘို့တဘူတာရောထွေးရန်လွယ်ကူသည်. လက်ျာ app ကိုနှင့်အတူ, သင်မှန်ကန်သောဘူတာရုံမှာချွတ်ရသေချာပါလိမ့်မည်.
ဝန်စည်. အခါအိတ်မှကြွလာ, အဘယ်သူမျှမအလေးချိန်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်ကတည်းကသင်ကဲ့သို့များများစားစားသင်သည်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်. သငျသညျ overhead သင့်ရဲ့အိတ်သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံနောက်ကွယ်မှ, သို့မဟုတ်တစ်အိတ်ထိန်သိမ်း၌သင်တို့၏ကားထဲတွင်.
ပထမဦးစွာအဆင့်အတန်းနှင့်ဒုတိယ-class ကိုလက်မှတ်တွေ. ပထမတန်းစားနှင့်ဒုတိယတန်းစားကားများအကြားကွာခြားမှုသိပ်မရှိပါ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ထိုင်ခုံနည်းနည်းပိုကြီးများမှာ. ဒုတိယလူတန်းစားကားများမှာလည်းဿုံအဆင်ပြေများမှာ. ပထမတန်းစားလက်မှတ်များသည်ဒုတိယတန်းစားခထက် ၁.၅ ဆပိုမိုများပြားသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်.
self-service ကိုစက်. self-်ထမ်းဆောင်လက်မှတ်စက်အသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား option ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, သငျသညျပြင်သစ်စကားမပြောကြပါလျှင်ဒါစိုးရိမ်ရန်မလိုပါင်.
စက်ဘီးတင်ဆောင်လာသော. ပြည်တွင်းနှင့်ဒေသတွင်းရထားတွင်, သငျသညျတာဝန်ခံအခမဲ့သင်နှင့်အတူတစ်ဦးစက်ဘီးယူနိုင်ပါသည်. TGVs နှင့်အချင်းချင်းည (နေ့ချင်းညချင်းရထား) သငျသညျသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေများအတွက်ဆိုင်ကယ်ယူခွင့်ပြုအနည်းငယ်လမ်းကြောင်းအပေါ် (များသောအားဖြင့်အကြောင်းကို€ 10). အခြားအ TGV ရထားတွင်, သင်တစ်ဦးဇစ်-up, ဆိုင်ကယ်အိတ်၌သင်တို့၏စက်ဘီးထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခြင်း. ခရီးတလျှောက်, သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုရထားကိုပြောင်းလဲရန်သင့်အားလိုအပ်မယ်. switching ရထားပုံမှန်အားမြန်ဆန်လွယ်ကူသောများမှာ, သငျသညျရထားများအကြားလုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ဒါစိုးရိမ်ရန်မလိုပါင်. တစ်ဦးကရထားဆက်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း၏အခြားဘက်ဒါမှမဟုတ်ရထားဘူတာရုံ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မှလမ်းလျှောက်ပါဝင်စေခြင်းငှါ,.
ရထားဘူတာရုံအမည်များကိုသိပါ. မြို့ကြီးများတွင်မျိုးစုံရထားဘူတာများ, ရှုပ်ထွေးမှုများဖန်တီးနိုင်သည့်. သင်သည်သူတို့၏အမည်များကိုအလွတ်ကျက်မနိုင်လျှင်, စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်သူတို့ကိုရေးချ, သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသူတို့ကိုကယ်တင်, သို့မဟုတ်တစ်ရထားလမ်းစီမံ app ကိုသုံး.
ရထားသပိတ်စိတ်ထဲ. ပြင်သစ်မီးရထားသပိတ်မှောက်ဘို့လူသိများသည်, သူတို့ကအမြဲတမ်းတဦးတည်းအပေါ်မသွားမီအများပြည်သူသတိပေး. တချို့ရထားနေဆဲ run ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, သငျသညျအဓိကအဆငျမပွမှေုကိုရှောင်ရှားလိုလျှင်သပိတ်အာရုံစိုက်ဖို့တစ်ခုခုများမှာ.
အသုံးပြုမှု Chip & PIN ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်. တစ်ဦး automated လက်မှတ်ကို kiosk အပေါ်တစ်ဦးလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်, သင်တစ်ဦး Chip လိုအပ်ပါလိမ့်မည် & PIN ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်, ဒါကြောင့်သေချာသင်သည်သင်၏ PIN ကုဒ်ကိုသိပါစေ, ကျနော်တို့ကအကြံပြုကြဘူးပေမယ့်, ဒါကြောင့်အလွန်စျေးကြီးရဲ့ကတည်းက.
ပြင်သစ်တွင်အားလုံးအဓိကမြို့ကြီးများ TGV ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ထား – နီးပါး၏အမြန်နှုန်းမှာခရီးသွားရထားနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားကွန်ယက်ကို 200 တစ်နာရီမိုင်. ဤအအမြန်နှုန်းမှာ, ပြင်သစ်areasရိယာအားလုံးသင့်လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ.
ကျနော်တို့ဒီလမ်းညွှန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ “ရထားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်” သငျသညျသေချာဘာလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာစတင်ရန်ရထားကိုယူပြီးစဉ်းစားပေမယ့်မထားဘူးဆိုရင်သင်ဘယ်လောက်ပြင်သစ်ရထားလမ်းစနစ်ကအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်အကူအညီများ၏အားကြီးသောနားလည်မှုပေးရ. သင်တစ်ဦးကျောပိုးအိတ်ခရီးထွက်စွန့်စားမှုအပေါ်ရှိမရှိ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်, သို့မဟုတ်တစ်မိသားစုအားလပ်ရက်အပေါ်, အကြှနျုပျတို့သညျဖုံးအုပျတယ်ပါပြီ, ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားသည့်ဖြစ်ပါတယ် မီးရထားလက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါရာအရပျ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ရထားအားဖြင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-france-train/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#sncf tgv ဘူတာရုံ ရထားလက်မှတ်တွေ ရထားခရီးသွား ဟုတ်ပါတယ် travelfrance